'युके भेरियन्ट' को निसानामा युवा र बालबालिका, मन्त्रालय भन्छ- अवस्था चिन्ताजनक
पछिल्लो समयमा नयाँ भाइरस संक्रमणकाे हटस्पट बनिसकेका जिल्लामा जाेखिम बढेकाे छ। कोरोना संक्रमणको पहिलो चरणमा वृद्धवृद्धा बढी प्रभावित बनेका थिए। तर, दोस्रो लहरमा युवा तथा बालबालिका संक्रमणको निसानामा परिरहेका छन्।
नेपालमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट (यूके भेरियन्ट) फैलिएको पुष्टि भएको छ।
पछिल्लो दुई सातायता कोरोना भाइरस संक्रमण दर बढ्न थालेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण मंगलबार पाँच हजार २०३ जनाको परीक्षण गरिएकामा ९.८ प्रतिशतमा संक्रमण पुष्टि भयो। ‍मंगलबार एकै दिन ९ जनाको मृत्यु भएको छ।
सिद्धिलाल राणाको दरबारमा जागिरे थिए। खोकनापारि फर्पिङमा रहेको चन्द्र–ज्योति विद्युत् गृहबाट उनको घर पायकमा पर्थ्याे। त्यसैले राणा सरकारले यही घरमा बिजुली बाल्ने निर्णय गरेका रहेछन्।
‘तीनै वटा नयाँ भेरियन्ट तीव्र संक्रामक छन्। एकजनाबाट अर्कोमा तीव्र गतिमा फैलिन्छन्।’
काठमाडौंको माइतीघर। हजारौं सवारी साधन, लाखौं यात्रु अहोरात्र कुदिरहेकाहुन्छन्। सबैको आन्दोलन गर्ने थलो पनि त्यही हो। प्राय सधै जसो कुनै न कुनै आन्दोलनले तातिरहेको हुन्छ माइतीघर।
कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट पुष्टि भएको दुई महिनाभन्दा बढी हुँदा पनि त्यसको प्रभावकारी परीक्षण नेपालमा सुरु हुन सकेको छैन।
'नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर आयो भन्न मिल्दैन'
गत फागुन महिनामा कोरोना संक्रमितको संख्या कम हुँदै गएको देखिए पनि चैतको सुरुदेखि नै कोरोना संक्रमितको संख्या फेरि बढ्न थालेको छ।
उपचारको दायरामा छैनन् ४१ हजार क्षयरोगी
नेपालमा हरेक वर्ष ६९ हजार क्षयरोगका बिरामी थपिन्छन्। तीमध्ये ४१ हजार बिरामी उपचारको दायराबाहिर रहेको राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको तथ्यांक छ।
‘संक्रमण रोकथाममा सहयोग गर्न सबै सरोकारवालालाई अनुरोध गरेका छौं। यति गर्दा पनि अटेरी भएमा लकडाउनबारे सोच्नुपर्ने हुन्छ।’
किन सुस्तायो कोरोना खोप अभियान ?
दोस्रो चरणमा पछिल्लो प्राथमिकतामा परेका नागरिकलाई पनि चैत पहिलो साताबाट खोप दिने योजना बनाएको थियो तर त्यसका लागि खोप सुनिश्चित भइसकेको छैन।
जोगिएला त खुवालुङ ?
‘हामीले सहज यात्राका लागि उक्त ढुंगा फोर्ने भनेका थियौं तर किराँतको सभ्यता जोडिएको कुरा बाहिर आएपछि नफुटाउने पक्षमा छौं।’
क्यान्सरका डाक्टर, जसका ६० भन्दा बढी आफन्त क्यान्सरकै बिरामी
परिवारमै ६० भन्दा बढी क्यान्सरबाट पीडित ! सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ। वरिष्ठ क्यान्सर विशेषज्ञ राजेन्द्र बरालका परिवार र आफन्त गरी ६० जनाभन्दा क्यान्सरबाट पीडित छन्, कतिपयको उपचार जारी छ भने कतिपयको निधन भइसकेको छ।
विरोधस्वरुप बिहीबार ‘अझै कति सहने ?’ अभियन्ताहरूले अध्यागमन विभाग अगाडि प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन नै गरे।
पहिलो चरणको सुरुमै खोप लगाएका स्वास्थ्यकर्मीमा खोपको असर देखिन थालेको छ। सरकारले खोप अभियान सुरु गरेको पहिलो दिन नै खोप लगाएका शुक्रराज अस्पतालका प्रमुख कन्सलटेन्ट डा. अनुप बास्तोलाका अनुसार चिकित्सकहरुको शरीरमा आइजीएम (इम्युनोग्लोविन एम) उत्पन्न भएको छ।
नेपालका ८६ प्रतिशत क्यान्सरका बिरामीले आर्थिक कठिनाइ भोग्नुपरेको तथ्यांक छ। १४ प्रतिशत बिरामीले मात्रै आफ्नो खर्च बेहोर्न सक्छन्।
१ मास्क नलगाई गाडी चढ्न निषेध
२ गण्डकी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान
३ दसौं महाधिवेशनका लागि एमालेको ६ महिने कार्ययोजना पारित
४ ओली आज इन्डियाको त्वंशरणम् भइसके : देउवा
५ लुम्बिनी सरकारमा नयाँ ट्विस्ट : अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद नै मन्त्री नियुक्त